แบบคัดกรองตนเอง สำหรับผู้สงสัยโรคไวรัสโคโรนา​ 19 (COVID-19) (Self-Screening Version 2)
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ ၁၉ သံသယရှိသူများအတွက် ကိုယ်တိုင်စီစစ်ခြင်း (COVID-19) (Self-Screening Version 2)
ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဌာနမှ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်မျိုးရိုးသစ် ၂၀၁၉ အပေါ်စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းနည်းလမ်းမှကိုးကားပြီး ဆေးကုသမှုနှင့်ရောဂါပြန့်ပွားမှုကိုကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက် မှန်ကန်သောအချက်အလက်များပေးပါရန်တောင်းဆိုအပ်ပါသည်။
เพศ (Sex) 性别 လိင် ชาย (Male) 男 ကျား หญิง (Female) 女 - မ
อายุ (Age) 年龄 အသက် 1234567 8910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
1. ท่านมีไข้หรือไม่ Do you have Fever? 您有发烧的症状吗 ၁။ သင့်တွင်အဖျားရှိ၊မရှိ
ไข้ Fever 发热 ဖျားနာခြင်း
ไอ Cough 咳嗽 ချောင်းဆိုးခြင်း
เจ็บคอ Sore throats 咽喉痛 ဖျားနာခြင်း
น้ํามูกไหล Runny nose 流鼻涕 နှာရည်ယိုခြင်း
เหนื่อยหอบ Shortness of breath 胸闷气短 နှာရည်ယိုခြင်း
ไม่มีอาการเหล่านี้ None of these symtoms. 沒有 အထက်ပါလက္ခဏာများမရှိပါ
2. ท่านมีประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ใช่หรือไม่ ? Do you have traveled from the Novel Coronavirus 2019 outbreak areas before get sick ? 发病前14天您是否来自中国、日本、新加坡或有关冠状病毒持续传播地区？ ၂။ အန္တရာယ်ရှိသောဒေသမှခရီးသွားလာခြင်းရှိ၊မရှိ
ใช่ Yes 是 ရှိပါသည်
คลิกเพื่อดูสถานที่เสี่ยง เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด ในช่วง 14 วันที่ผ่านมา (คลิกดูพื้นที่ได้จาก link สสจ.) เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม หรือ พื้นที่เฝ้าระวัง (คลิกดูพื้นที่ได้จาก link สสจ.)
ไม่ใช่ No. 否 မရှိပါဘူး
၂၀၂၀ © ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဌာနချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်မှမွမ်းမံသည်။